Vaovao - Sokafy ny tsenan'i Russia Far Atsinanana
Tamin'ny volana aogositra 2020, ny labiera mainty andiany voalohany dia natolotra soa aman-tsara tany amin'ny tsenan'i Russia Far Atsinanana. Amin'ny maha marika labiera malaza an'ny labiera JINBOSHI ity, sambany no niditra tao amin'ny tsenan'i Rosia ny labiera Black Beauty.
Tato ho ato, ny fangatahana labiera avo lenta dia miakatra ao Russia. Mandritra izany fotoana izany dia nandrisika hatry ny ela ny fifanakalozana ara-toekarena amin'i Atsinanana Rosiana i Sina.
"Nisy namana iray avy any Chine nanosika ahy hanomboka hieritreritra ny hanafatra labiera any Russia", hoy i Victor Loginov, mpanafatra labiera Black Beauty. "Betsaka ny olona eto no mitaraina fa tsy mahita labiera avo lenta eto an-toerana, ary dodona ny hianatra teknika fanaovana labiera avy amin'ny firenen-kafa".
Farany, nifandray tamin'i JINBOSHI i Victor ary nahazo ny fanasana hitsidika labiera. Tamin'ny volana novambra lasa teo, taorian'ny fitsidihany ny JINBOSHI sy ny fanandramana ny labiaranay, dia afa-po tamin'ny fanodinana labiera sy teknolojia i Victor.
Na dia tsy tsara aza ny varotra labiera noho ny coronavirus, ny labiera mpanao asa-tanana kalitao ihany dia mbola afaka mahazo ny tsenany ihany.
Rehefa tonga amin'i Victor amin'ny alàlan'ny finday izahay dia faly miresaka momba ny fanaovana labiera, ary faly miresaka momba ny ho avy labiera any Russia. Mandritra izany fotoana izany ny dinidinika ataontsika dia mahatratra an-drainy noho ny - niverina 12 volana hatramin'ny voalohany niresahan'i Victor taminay tamin'ny Internet. "Raha afaka manafatra entana hafa vita any Chine isika, nahoana isika no afaka manafatra labiera any Chine?" Ny hevitr'i Victor hanandrana manafatra labiera any Chine dia nahatanteraka izany tamin'ny taona 2020.
"Raha ny marina dia efa nanandrana saika ny labiera rehetra aho rehefa nitsidika an'i Shina", hoy i Victor, "avy eo niafara tamin'ny Black Beauty aho. Raharaha iray izay tena ankasitrahako tokoa satria mahita mpiara-miasa tsara any Shina aho ”.
Antony iray hafa ifikirany amin'ny Black Beauty: ny hops sy ny masirasira rehetra noraisinay dia avy any Eropa na Amerika. Ampahany lehibe amin'ny famokarana labiera tsara, hoy izy. “Iray amin'ireo loharano tiako indrindra amin'ny orinasako labiera io. Zavatra tena tiako io ”, hoy hatrany i Victor.
Aluminium Can 355ml Standard, Sleek 310ml Aluminium Can, Aluminium Afaka 310ml malama, Aluminium Afaka 250ml malama, Aluminium Can 330ml Standard, Sifotra 200ml vita amin'ny aliminioma,